Maahan markii ugu horreeysay oo musuq uu ka dhaco Ceeymiska Qaranka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gawaari boliis oo waardiyeeyneya dacwad ka socota maxkamad. Foto: Karwan Tahir/Sveriges Radio
Maahan markii ugu horreeysay oo musuq uu ka dhaco Ceeymiska Qaranka
La daabacay fredag 26 februari 2016 kl 16.15
Ma ahan markii ugu horreeysay oo saraakiil ka howl-gasha hayadda ceeymiska qaranka lagu tuhmo musuqmaasuq iyo laaluush-qaadasho.
Falalkaasina oo salka ku haya dhaqaalaha ay hayaddu ku bixiso shaqaalaha u shaqeeya ama caawiya dadyoowga aan nafsaddooda ku filleyn. Iyadoona mid ka mid ah saraakiisha hayadda sannadkii ina dhaafay uu xukun ku dhacay la xiriiray dacwaddii musuqmaasuqa ee Södertälje.
Dembi-baare Torbjörn Hermansson, kana mid ahaa saraakiishii baaritaanka qaybta ka ahayd ayaa sheegay in aannu ka cajabin in shaqaale hor leh dacwad laga gudbiyay.
– Waxaan qabaa in hayado badani aaney dhab wax u fahansaneyn iyo in aaneyba aamin-saneyn in falal noocani ah ey hayaddooda ka dhici karaan. Iyada oo waxa laga hadleyaa tahay miisaaniyad aad u ballaaran oo hayaddu ku bixiso howlahan, waaney sahlan tahay sidii miisaaniyadda gacanta loogu dhigi lahaa, waana sababta aanan ula yaabayn inay jiraan dad noocaasi ah, sida uu sheegay Torbjörn Hermansson.
Sarkaalkii hayadda caymiska qaranka ee lagu xukumay Södertälje ayaa xiriir dhow la lahaa eedeeysanihii ugu waynaa ee dacwadda. Xaakim Bertil Ahnborg, kana howl-gala maxkamadda racfaanka ee dacwadda qaaday ayaa sheegay in sarkaalka ceeymiska qaranku dembigaa u galay si uu xaaskiisa u caawiyo. Waxay ka mid ahayd dadyoow la sheegay inay kalkaaliye ku shaqeeyn jireen , hase yeeshee mushaar ku qaadan jirtay iyada oo aan shaqa tegin ama wax shaqa ah qaban. Mushaarkaasina oo ka iman jiray hayadda ceeymiska qaranka. Halka Iyada iyo ninkeediiba lagu riday xukun wax is-daba marin culus.
Sidoo kale labada ruux ee iminka lagu tuhun-san yahay falal musqmaasuq ayaa xiriir la leh shirkadda lagu tuhun-san yahay iney xogaha u gudbiyeen.
Dembi-baare Torbjörn Hermansson ayaa sheegay in marka loo barbar-dhigo hayadaha kale ay hayadda ceeymiska qaranku ka wanaag-san tahay hayado badan sidii ay musmusaaqu ku ogaan lahaayeen.
– Waxaan aamin-sannahay iney jiraan heeyado kale oo ey ka dhacaan falal noocaasi ah, balse aan weli la ogaan. Waa mid lagu ammaano hayadda ceeymiska qaranku inay dadyoowgaasi helaan. Waxaanan qabaa in caqabadahani sida loo maleeyneyo ey ka ballaaran yihiin, sida uu sheegay Dembi-baare Torbjörn Hermansson.
Shaqaalaha xafiiska caymiska qaranka oo musuqmaasuq lagu eedeeyey